प्रदेश ३ को राजधानी विवाद : ‘हेटौंडा’ बाट दयाँवायाँ नगर्न ओली-प्रचण्ड-पौडेलको चेतावनी | NepalDut
प्रदेश ३ को राजधानी विवाद : ‘हेटौंडा’ बाट दयाँवायाँ नगर्न ओली-प्रचण्ड-पौडेलको चेतावनी
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेलले ‘प्रदेश ३ को राजधानी हेटौडाबाट दायाँबायाँ नगर्न कडा चेतावनी दिएका छन् ।
केही दिनअघि बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले प्रदेश नं. ३ को राजधानी हेटौंडालाई बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि नेकपाभित्र तीव्र विवाद भएको छ ।
नेकपाको मकवानपुरको हेटौडा राख्न दिएको निर्देशन संविधान र प्रदेशसभाको अधिकारविपरित भन्दै विरोध भइरहेको छ ।
विवाद बढ्दै जान थालेपछि प्रदेश ३ का पार्टी इन्चार्ज, सहइन्चार्ज र अध्यक्षलगायतका नेताहरूलाई बालुवाटार बोलाएर अध्यक्षद्वय र महासचिवले चेतावनी दिएको प्रदेशसभाका १ सांसदले बताए ।
‘राष्ट्रिय राजनीतिको समेत विश्लेषण गरेर हेटौडा राजधानी राख्ने निर्णय गरेको हो । तपाइँहरुले पनि त्यसै अनुसार भूमिका निर्वाह गर्नु । त्यसबाट दायाँबायाँ नहोस्’, बालुवाटारमा अध्यक्षद्धयको निर्देशन उद्धृत गर्दै प्रदेश ३ का एक नेताले भने, ‘हेटौडामा संरचना बनिसकेका छन् । अन्य ठाउँमा फेरि संरचनाहरू बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो झन्झट किन व्यहोर्नु ? त्यसैले यो निर्णय परिवर्तन हुँदैन ।’
प्रदेशसभा सदस्यहरूले पार्टी निर्णयको चर्को विरोध गर्दै कुनै हालतमा हेटौडा राजधानी हुन नसक्ने बताइरहेका छन् । तर, नेकपाको नेतृत्व भने मातहतका पार्टी कमिटीहरुलाई हेटौडा नै राजधानी राख्न चर्को ‘दवाव’ दिइरहेको छ ।
यता, अध्यक्षद्वय र महासचिवको यस्तो निर्देशनलाई नेकपा ३ नम्बर प्रदेश कमिटी संयोजक अष्टलक्ष्मी शाक्यले भने ठाडै विरोध गरेकी थिइन् ।
‘तपाइँहरूको निर्देशन पालना हुन सक्दैन, यो व्यवहारिक पनि हुँदैन । संविधान र प्रदेशसभाको अधिकारविपरित पनि हुन्छ । त्यसकारण संविधानअनुसार यसबारेमा प्रदेश सभामा मतदानमार्फत निर्णय हुन्छ’, शाक्यले अध्यक्षद्वयलाई जवाफ दिएकी थिइन् ।
शाक्यले सचिवालयले प्रदेश ३ को राजधानीबारे कसरी अघि बढ्ने भनेर एक पटक पनि प्रदेश कमिटी र प्रदेश सभा सदस्यहरुसँग सामान्य छलफल र परामर्श समेत नगरी एकाएक यस्तो निर्देशन दिएकोमा आफूहरु अचम्भित भएको बताइन् ।
‘हामीसँग छलफल र परामर्श पनि गर्न सकिन्थ्यो तर त्यसो गरिएन । एकैपटक निर्देशन दिइयो, यो प्रदेशसभाको अधिकार विपरित छ,’ शाक्यले भनिन्, ‘हामीले पार्टीका सवै निर्णय मान्दै आएका थियौँ । पार्टी हितकै लागि खुरुखूरु मान्दै आए पनि यो निर्णय मान्नसक्ने किसिमकै छैन । यसमा हाम्रो सहमति हुने कुरै छैन ।’